Resin Model Car, Metal Model Cars, Plastic Model Car - Atọ Nkume
Porsche 911, nke akpọrọ na mbụ 901, pụtara na 1967 ma ọ dị na nhazi ọtụtụ ahụ, gụnyere Targa dị iche iche. Enwere ike ịzụta Targa site na nhọta nke injin anọ, na -emepụta n'etiti ịnyịnya 130 na 160 dịka ụdị ndị ọzọ esonyere na usoro 1967.
Ihe nlere a biara na ulo enwere ike iwepu ya na nnochi di nro.
Anyị Mission: A mụrụ ezigbo ụgbọ ala n'ihi ụdị ahụ.
Anyị Vision: Ka ndị ahịa na-aga n'ihu na-eto anyị.
Mmụọ anyị: Kwe ka ndị ọrụ were obi ụtọ na-arụ ọrụ.
Ihe omuma anyi: Mpaghara WIN-WIN dị mgbe niile na enweghị azụmahịa a ga-atụle.